Maitiro ekuisa Clash Royale pane yako iPhone izvozvi | IPhone nhau
Mumwe wemitambo yakanyanya kutarisirwa yenguva ndeye rwisana Remake. Vagadziri veClash of Clans ichavhura munaKurume mutambo mutsva wezano uye, senge maviri apfuura, anovimbiswa kubudirira. Dambudziko nemhando dzemitambo ndedzekuti dzinoziviswa nguva refu isati yatanga uye, dzimwe nguva uye sezvazviri, inowanikwa mune dzimwe nyika kuyedza mashandiro ayo isati yatanga iyo pasi rese.
Asi, kana iwe uchida kuyedza, iwe unogona izvozvi, sekureba sekunge iwe uchida kuita nhanho shoma usati watora nekuisa. Zviri zvekumisikidza yako Apple ID ku chimwe chezvitoro zvine mutambo uripo iyo, mune iyi kesi, iri yeCanada. Muchirongwa ichi tinokuratidza maitiro ekuisa Clash Royale isati yawanikwa munharaunda yako.
1 Maitiro ekuisa Clash Royale isati yaburitswa
1.1 Dhata yekupinda
Maitiro ekuisa Clash Royale isati yaburitswa
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti iyi nzira hazvishande kana iwe wakanyoreswa kune chero ehumwe masevhisi inopihwa naApple, senge Apple Music. Izvo hazvishande nekuti zvinotitaurira kukanzura kunyoreswa uye, kuva nhasi Kurume 1 uye kadhi rakabhadhariswa mari yemwedzi zuro, zvinoita kunge isiri chibvumirano chakanaka, handiti? Heano matanho ekutevera kuisa Clash Royale pane yako iOS chishandiso izvozvi.
Tinoenda kuTunes Store neApp Store.
Tinobaya paApple ID uyezve paTarisa Apple ID.
Isu tinobata Apple ID zvakare.
Tiri kuenda Kuchinja Nyika kana Dunhu.
Senzira yekubhadhara, tinoti Hapana
Uye isu tinowedzera iyo data yandinozopa pazasi.
Kero: Chancery: 2 Bloor Street kumabvazuva, sutu 1201
Dunhu: ON - Ontario
Kodhi Yepositi: M4W 1A8
Runhare: 563 1234567
Uye ndizvo chete. Pane chinhu chimwe chete chekuchengeta mupfungwa: iyi nzira kurodha pasi mutambo zviri pamutemo kubva kuCanada Chitoro. Kana isu tikasachinja kuenda kuChitoro chenyika yedu zvakare, maapplication atakaisa haagadziridzwe, saka zvakafanira kuita imwe nzira zvakare kana mutambo warodhaunzwa.
Wakamboedza Clash Royale? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa Clash Royale izvozvi pane yako iPhone, iPad kana iPod Kubata
Chinhu chakashata chakaitika kwandiri ndechekuti kana iwe uine mari seni uye uine 0,02 masendi kana chimwe chinhu chakafanana chausingakwanise kushandisa unofanirwa kugadzira account nyowani mutambo wandinoda ini ndinoufarira kupfuura kupesana kwemhuri yandinokurudzira ichokwadi
Kana uchichinja nyika, inondibvunza ruzivo rwekubhadhara.
Iyi hunyengeri yave iripo kweinopfuura mwedzi
Zvinotaurwa nemumwe waanoshanda naye, kudzorera account yangu kuSpain ndinofanira kuisa ruzivo rwekubhadhara. Ndisati ndambove naro mune imwe. Zvingaitwe sei kuti isapinda mune chero ruzivo rwekubhadhara?
Mutambo wandinoda hunyengeri unoshanda zvakakwana iwo mutambo wandinokurudzira iwo kupfuura
Pindura kuna futureMoth
Nezuro zvakabuda zviri pamutemo paIOS uye Android
Ini ndichango kurodha pasi neakaundi yangu kuSpain.
Google Mepu inotipa mukana wekuwedzera zviteshi munzira